korean manhwa - andian-dahatsoratra vaovao, hafainganam-pandeha haingam-pandeha, fanavaozana haingana - ManyToon - Vakio ny olon-dehibe amin'ny olon-dehibe
Salanisa 3.8 / 5 amin'ny vato 49 total.
37th, manana fijery isam-bolana 89K
Ireo mpampiasa 194 dia nanamarika ity
Indray andro i Kyle dia mahazo lahatsoratra avy amin'ny reniny sakaizany atao hoe Mindy, ilay hany ankizivavy efa tiany ary ny hany tovovavy iray nampifaly azy
Ao amin'ny fizotry ny indostrian'ny tantara an-tsary, ny webtoon, manhwa, manhua dia mifaninana amin'ireo tsipika malaza amin'ny tantara an-tsary malaza an'ny Eropa japoney sy amerikana Manga. Na izany aza, misy fomba fijery mahaliana momba ny fikomiana amin'ny webtoon. Miaraka amin'ny onjan'ny webtoon dia tena tian'ny mpihaino manerantany. Mampahafantatra anao ny tontolon'ny webtoon izahay amin'ny alàlan'ny tranokala manytoon.com, izay tranonkala lehibe miaraka amin'ireo tantara 1000 manhwa, maimaim-poana. Afaka mamaky tantara an-tsary avo lenta avy amin'ny manytoon.com. Toerana iray mahafinaritra ho an'ireo tia tantara an-tsary manerantany. Reading sary an-tserasera maimaimpoana at manytoon.com no tena paradisa ho an'ireo mpaka sary mampihomehy.
Chapter 47 Janoary 7, 2020
Chapter 46 Desambra 29, 2019
Chapter 45 Desambra 26, 2019
Chapter 44 Desambra 19, 2019
Chapter 43 Desambra 10, 2019
Chapter 42 Desambra 10, 2019
Chapter 41 Novambra 24, 2019
Chapter 40 Novambra 18, 2019
Chapter 39 Novambra 18, 2019
Chapter 38 Novambra 18, 2019
Chapter 37 Novambra 1, 2019
Chapter 36 Novambra 1, 2019
Chapter 29 Septambra 11, 2019
Chapter 28 Septambra 11, 2019
Chapter 27 Septambra 11, 2019
Chapter 26 Septambra 11, 2019
Chapter 25 Septambra 11, 2019
Chapter 24 Septambra 11, 2019
Chapter 23 Septambra 11, 2019
Chapter 22 Jolay 15, 2019
Chapter 21 Jolay 12, 2019
Chapter 20 Jolay 12, 2019
Chapter 18 Jona 19, 2019
Chapter 15 Enga anie 29, 2019
Chapter 14 Enga anie 23, 2019
Chapter 13 Enga anie 11, 2019
Chapter 12 Enga anie 7, 2019
Chapter 11 Enga anie 1, 2019
Chapter 10 Aprily 21, 2019
Chapter 8 Aprily 8, 2019
Matetika i MC no kanosa
vehivavy be tampoka io